Serivisy fanamafisam-peo ho an'ny alimika sy hafa - Minghe Casting
Ny fangejana ny fikororohana dia manondro ny fomba famafana amin'ny alàlan'ny fampiasana ny hafanana ateraky ny fikororohana ny sehatry ny fifandraisana amin'ny workpiece ho loharano hafanana hiteraka ny fiasan'ny plastika amin'ny tsindry.
Eo ambanin'ny hetsiky ny tsindry, eo ambanin'ny fiasan'ny tsindry tsy tapaka na mihombo sy ny herin'ny herinaratra, ny fihetsika mifandraika eo amin'ny faran'ny fifandraisana dia miteraka hafanana hafanana sy hafanana fihenan'ny plastika amin'ny velaran'ny fikororohana sy ny manodidina azy, ka miakatra hatrany ny maripanan'ny manodidina Ny elanelam-potoana akaiky nefa amin'ny ankapobeny ambany noho ny teboka miempo, mihena ny fanoherana ny fiovan'ny fitaovana, mihatsara ny plastika ary tapaka ny horonantsary oxide amin'ny interface. Eo ambanin'ny asan'ny tsindry mahasosotra, ny fiovan'ny plastika sy ny fikorianan'ny fitaovana dia miaraka amin'ny fanaparitahana molekiola sy ny famerenana amin'ny laoniny ny interface. Fomba fanamafisam-peo matevina amin'ny fahatsapana welding.
Minghe dia manolotra vahaolana fikorontanana feno ho an'ny fampiharana matevina be dia be - miaraka amin'ny portfolio masinina lehibe sy fanampiana fanampiny manomboka amin'ny injeniera ka hatramin'ny serivisy. Amin'ny maha-mpitarika manerantany amin'ny famokarana famatsiam-bola, dia mirehareha amin'ny fanolorana ny serivisy tsara indrindra eto an-tsena ihany izahay. Ny fitiavantsika ny serivisy ho an'ny mpanjifa miavaka dia mitarika ny famirapiratanay. Raha te hahalala bebe kokoa momba ny serivisinay na hifanakalo hevitra momba ny safidy ho an'ny tetikasanao manaraka dia mankanesa any amin'ny ekipa anio.
Ny votoatin'ny welding vy
Matetika ny faran'ny vy amin'ny faritra mekanika dia mifamatotra sy mihodina noho ny fikororohana. Amin'ny dingan'ny fanapahana vy sy ny fihodinan'ny hafainganam-pandeha haingana, dia matetika no hita fa ny haben'ny faritra vy roa dia mihombo noho ny fikororohana sy ny hafanana. Ohatra: mandritra ny fihodinana, ny sisiny namboarina dia namboarina tamin'ny fitaovana fihodinana; mandritra ny fandavahana dia mifamatotra matetika ny fandavahana sy ny workpiece; ny sliding bear dia miraikitra noho ny fandoroana ny hazo. Mazava ho azy fa lozam-pifamoivoizana hatrany no ezahan'ny olona sorohina. Nofakafakaina toy ny tranga welding, ny fizotrany dia tsy tonga lafatra, ary ny kalitaon'ny famafana dia tsy mety.
Na izany aza, amin'ny alàlan'ny famakafakana ireo fisehoan-javatra mifamatotra sy mifamatotra ireo dia manampy ny mahatakatra ny votoatin'ny fikolokoloana fikikisana.
Ny fihantsiana dia manimba ny sarimihetsika oksida amin'ny metaly amboniny. Ny taranaka hafanana mifangaro dia mampihena ny tanjaky ny vy fa mampitombo ny plastika azy. Ny metaly ambonin'ny korontana dia miteraka fiovan'ny plastika sy fikorianany, izay manakana ny fitrandrahana vy, mampiroborobo ny fielezan'ny atôma vy, ary mamorona fitambarana mihombo mafy. Io no votoatin'ny welding vy.
Ny endri-javatra ny welding vy
Maninona no mivoatra haingana ny fikorontanan'ny friksi eto an-trano sy any ivelany, ary malalaka be ny fampiharana azy, satria misy tombony maromaro. Ireto tombontsoa ireto dia misy ireto manaraka ireto:
1. Ny kalitaon'ny welding dia tsara sy milamina
Ny taham-piraisan'ny fifangaroan'ny fiovan'ny alimina-varahina novokarin'ny fanamafisana ny maripana ambany eto amin'ny fireneko dia latsaky ny 0.01%; ny orinasa mpanao vina dia mampiasa fantsom-boaloboka fa tsy fanamafisam-peo hamoahana coils economizer, ary ny tahan'ny famafana dia ahena 10% ka hatramin'ny 0.001%. Alemana Andrefana dia mampiasa fantsom-boaloboka fa tsy fanamafisam-peo hamoahana valves fanalefahana fiara, ary ny tahan'ny fandavana ny welding dia nidina hatramin'ny 1.4% ka hatramin'ny 0.04 ~ 0.01%. Hita avy amin'ireo ohatra etsy ambony ireo fa ambany dia ambany ny tahan'ny famafana fikolokoloana, manodidina ny 1% amin'ny fomba famafana ankapobeny.
2. Mety amin'ny fametahana vy tsy mitovy sy metaly tsy mitovy.
Ny fikororohana fikorontanana dia tsy vitan'ny manamboatra vy tsy mitovy fotsiny, fa koa ny vy tsy mitovy sy ny metaly tsy mitovy amin'ny fananana mekanika sy ara-batana samy hafa amin'ny hafanan'ny efitrano sy ny mari-pana avo lenta, toy ny vy vita amin'ny karbonina — vy vy haingam-pandeha; varahina — vy vy. Ho fanampin'izany, izy io koa dia afaka manefy metaly tsy mitovy izay mamokatra firara madinidinika, toy ny varahina, alim-by, aluminium sns.
3. Famaritana avo lenta amin'ny haben'ny fanamoriana
Ho an'ny motera diesel alohan'ny fandoroana novokarin'ny fikikisana, ny lesoka farany ambony amin'ny halavany dia ± 0.1 mm. Ny milina fantsom-panafody manokana dia afaka miantoka fa ny fandeferana lava amin'ny fametahana dia 0.2 mm, ary ny eccentricity dia ambany noho ny 0.2 mm. Noho izany, ny fikikisana fikikisana dia tsy ampiasaina hanamboarana banga fotsiny, fa hanodinana ireo vokatra tafangona ihany koa.
4. Ny milina fanamoriana dia manana hery kely sy angovo kely.
Raha ampitahaina amin'ny famafana fikolokoloana sy ny fikolokoloana tselatra dia manodidina ny 80 ~ 90% ny fitsitsiana angovo.
5. Fiarovana ny tontolo iainana amin'ny fangejana fikororohana
Ny toeram-piasan'ny fikorontanana dia tsy mahadio, tsy misy bara, arka ary gazy manimba, izay manampy amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, ary mety ampiasaina amin'ny tsipika famokarana mandeha ho azy miaraka amin'ny fomba fanodinana vy hafa.